Fiovam-pitantanana goavana ho an’ny Lingua ! · Global Voices teny Malagasy
Fiovam-pitantanana goavana ho an'ny Lingua !
Voadika ny 15 Jona 2019 14:38 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny May 2015)
Paula Goes sy Mohamed ElGohary. Sary nopihan'i Jeremy Clarke, lisansa CC 2.0 .
Ry GVers malala!
Mientanentana ery aho hanambara ireo fiovàna goavana sasantsasany ato amin'ny ekipa Lingua misy antsika. Nandritra ny taona vitsy lasa, Paula Goes no toniandahatsoratra tamin'ny tenimpirenena maro tato amintsika, nisahana ny fifandraisana teo amin'ireo tarika Lingua sy ny trano fanoratana, no sady koa nanara-maso ny Tetikasa Lingua. Mohamed ElGohary no mpandrindra ny Lingua, ka andraikiny voalohany indrindra tamin'izany ny fitantanana isanandro ireo endriky ny Lingua, ary koa ny fanarahana ireo angondrakitra, fanampiana amin'ny famahàna olana ara-teknika, ary zavatra marobe samihafa.
Manomboka ny volana May, Gohary no ho lasa Tale mitantana ny Lingua, handray ny andraikitr'i Paula amin'ny fanarahamaso ny tetikasa Lingua manontolo. Tafiditra anatin'izany ny fitantanana ny firoboroboana sy ny faharetan'ireo vondrom-piarahamonina Lingua, ny fiasana mikaroka tetikady iray ho an'ireo tranonkala Lingua, ny fomba fanaon'ny trano famoahana sy ny fahaizamanao, ny fanofanana, ny fametrahana fiarahamiasa, fandraisana mpamoaka lahatsoratra hiasa, ary ny fitantanana ny antontanisa sy angondrakitra manerana ireo tranonkala rehetra. Asa lehibe sy manana ny lanjany ho an'ny GV izany, ary tena faly tokoa isika mahita an'i Gohary tafakatra ho amin'io toerana io.
Etsy andaniny, hikisaka hifantoka amin'ny asany i Paula, dia ny fananganana ny sampanasa fandikàna izay omen'i GV ho an'ireo mpiara-miombona antoka amintsika sy ireo fikambanana hafa mifandray amin'ny iraka tontosaina, mifototra amin'ireo fotokevitra fifanakalozana fandikàna tsy mitanila aminà taha araka ny tokony ho izy ho an'ny asan'ireo mpikambana ato anatin'ny vondrom-piarahamonina izay mirotsaka manome ireny asa fandikàna ireny. Paula no nitarika ny ezaka tato amin'ny GV raha resaka fiarahana miasa sy tolotra fandikàna nandritra ny taona marobe, niasa niaraka tamin'ireo mpiara-miombona antoka toy ny Witness, MLDI, Refugees United sy ny Web We Want. Tena nanana ny lanjany tokoa ho an'ny vondrom-piarahamonina sy ny iraka tontosain'ny GV io asa io satria manampy amin'ny fahazoana vaovao toy ny taridàlana amin'ny fisoloana vava, antontan-kevitra mitombina araka ny lalàna sy ny politika, ary ny zavatra nosoratantsika ihany mba ho aminà fiteny marobe kokoa.
Ifantohan'i Paula bebe kokoa ny resaka faomezana tambiny tsy mitanila ho an'ireo mpandika, ary koa ny fanampiana ny Global Voices hanangana fidirambola hafa hiteraka tombontsoa ho an'ny vondrom-piarahamonina sy, amin'ny maha-fikambanana antsika, irariana hanampy antsika tsy hiankin-doha amin'ny famatsiambolan'ireo malala-tànana. Ho tafiditra anatin'ny asan'i Paula ny fananganana tetikadim-barotra sy fampiroboroboana ny tolotra fandikàna ataontsika, ny fitiliana ireo mpiara-miombona antoka tiantsika iarahana miasa, ary ny fitantanana ireo fifanarahana asa sy tetikasa.
Atsy ho atsy dia samy hizara ny zavatra eritreretiny momba ireo andraikitra vaovao tsirairay noraisiny i Paula sy Gohary. Fa ny anio aloha, iangaviako ianareo hiray feo amiko hiarahaba azy ireo!